Support – Ukusekela Windows 10
Ifayela le-Helppane.exe liyingxenye ye-Assistance Platform Client yama-Windows operating systems. Inesibopho sokuhlinzeka ngezinsiza nezinsizakalo zokusekela. Njengoba ekuqaleni iqaliswe nge-Windows OS, i-Helppane.exe ihlanganiswe kuyo futhi isebenza kahle ngaphakathi kwendawo yayo.
Uma uya ku-Properties, uzobona ukuthi inqubo ye-helppane.exe ihlotshaniswa nosizo lwe-Microsoft nosizo lwe-Microsoft. Uma ucindezela i-F1 ekhibhodi yakho, ikhasi le-Microsoft Support lizovula.
Continue reading “helppane.exe Ukwelekelelwa nokuSizwa kwe-Microsoft”
Author SupportPosted on 22/12/2018 Categories UncategorizedLeave a comment on helppane.exe Ukwelekelelwa nokuSizwa kwe-Microsoft